भैसीको दुधका कारण प्रहरीले गो ली समेत च लाइयो!! – News Nepali Dainik
भैसीको दुधका कारण प्रहरीले गो ली समेत च लाइयो!!
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र १७, २०७७ समय: १३:३५:५२
भैसीको दुधका कारण भएको विवादका बीच गो ली समेत च ले को छ । यो घटना भारतको आजमगढमा भएको हो । भैंसेको दुधले यति हंगामा भयो की दुई पक्ष एक आपसमा भि डे का छन् । किनेर लिएर गएको भैसीले थोरै दुध दियो भन्दै विवाद सुरु भएको हो ।
अवस्था सामान्य बनाउन फा य रिं ग भएको छ । ठूलो मात्रामा प्रहरी परिचालन गर्नु परेको छ । उत्तर प्रदेशको आजमगढ जिल्लामा भैंसीको दुधका कारण त्यहाँ यति ठूलो विवाद होला भन्ने कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन । भैंस खरीद गरिसकेपछि, जब उसको दूध कम भयो, भैसी किन्ने मानिस रिसाए । भैंस फिर्ता गर्ने बारेमा दुई बीच विवाद भएको थियो। यो विवाद यति धेरै बढ्यो कि आइतवार हंगामा भयो ।
यद्धपी दुवै तर्फ कुनै क्ष ती भने भएको छैन । यो आजमगढको जीनपुर कोतवालीको गाउँ धौरहराको सम्पूर्ण मामला हो। फहीम पुत्र युसुफ सोही गाउँका सोनू पुत्र अनीश को घरमा पुगेका थिए । उनले विवाद खडा गरे । फा ए रिं ग पनि उनैले गरे । जसका कारण स्थानिय डराए । फहिमको १५ बर्षे केटा, फहद खान घटनाको समयमा कोठामा आराम गरिरहेका थिए। घटनामा उनी जोगीएर प्रहरीलाई खबर गर्न पुगे ।
फहीमकी छोरी महाजाबिनले आरोपित सोनु घरको छतमा चढेर फा ए र गरेको बताइन । उनका भाई मुस्किलले बाँचेका थिए । गो ली उनको कोठामा पुगेको थियो । एक महिना अघि सोनूले एउटा भैंसे खरीद गरेका थिए । यो किनेको बेलामा भनिएको थियो कि भैंसीले सात महिनासम्म दूध दिन्छ, तर केही दिन पछि भैसीले दुध दिन बन्द गर्यो । यो भैंसा ४२ हजार रुपैयाँमा किनेर लगेका थिए । दुध दिन बन्द गरेपछि उनी भैसी फिर्ता दिन आएका थिए । तर विक्रेताले मानेनन् ।
Last Updated on: March 30th, 2021 at 1:35 pm